Vashanyi uye vagari vanofanirwa kuratidza vax / isina bvunzo bvunzo yekupinda muOahu mabhizinesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Vashanyi uye vagari vanofanirwa kuratidza vax / isina bvunzo bvunzo yekupinda muOahu mabhizinesi
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Culinary • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kamaainas • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Uchapupu hunodiwa kupinda mumaresitorendi, mabara, uye zvimwe
Honolulu Meya Rick Blangiardi akazivisa nhasi, Muvhuro, Nyamavhuvhu 30, 2021, kuti kutanga Nyamavhuvhu 13, 2021, vese vatengi vanoda kupinda muzvivakwa zveOahu vachada kupa humbowo hwejekiseni kana humbowo hweyakaipa COVID-19 bvunzo mukati memakumi mana apfuura maawa.
Iyi nyowani Safe Access Oahu yekurumidzira odhiyo iri mukupindura kuenderera kuri kuitika kweye itsva COVID-19 kesi dzakabuda kubvira pakauya Delta misiyano.
Iyi yakawedzera nhamba yemakesi iri kuisa kudiwa kukuru kuzvipatara zveHawaii nevashandi.
Inosanganisirwa neumbowo hwekubaiwa kana zvabuda bvunzo zvisina kunaka, vashandi vemabhizinesi aya vachatofanira kuratidza makadhi avo evax kana zvabuda.
ichi itsva emergency emergency ichagara ichishanda kwemazuva makumi matanhatu. Nyika nedunhu zvakaisawo masimba ekudzivirira vashandi. Vana vari pasi pegumi nemaviri, vasina kukodzera majekiseni, vanoregererwa kubva pane zvinodiwa.
Aya mabhizinesi anotevera ari kutevera pasi peiyi mvumo nyowani:
Maresitorendi nemabhawa (kutora kunosunungurwa) - doro rinomira kupihwa kuma10 manheru
Gyms uye zvemuviri zvivakwa, kusanganisira zvekutamba studio
Bowling alleys, arcades, uye mabhiridha dzimba
Indoor zvikamu zve botanical minda
Aquariums, hupenyu hwegungwa zvinokwezva
Yekutengeserana yekuvaraidza igwa
Veruzhinji uye akazvimirira ekutengesa madziva
Kupfura / miseve yekupfura
Zvimwe zvinokwezva zvekutengesa senge go kart, mini gorofu
Chero zvivakwa zvinopa chikafu uye / kana chinwiwa panzvimbo yekushandisa
Humbowo hunogamuchirwa hwejekiseni
Uchapupu hwekudzivirira zvizere zvinoreva kuratidza kuti wapedza chirongwa chekudzivirira chinotenderwa neHawaii Dhipatimendi rehutano maererano nezvose zvinodiwa neHurumende's Safe Travels chirongwa kuburikidza nekupa:
kopi yakaoma yekadhi-rinotenderwa kadhi rekudzivirira;
mufananidzo / kopi yedhijitari yekadhi-inobvumidzwa nehutachiona kadhi; kana
yeHawaii inotenderwa nedhijitari / smart kifaa kunyorera ichisimbisa izere nhomba yekudzivirira (kusanganisira kuburikidza neSafe Travels chirongwa / kunyorera).
Iwe unofanirwa zvakare kuunza kuzivikanwa neruzivo rwacho seuchapupu hwejekiseni.
"Kubaya nhomba zvizere" zvinoreva kuti masvondo maviri apfuura mushure medosi yechipiri mune maviri-madhizaini eCVID-2 yekudzivirira akapihwa mvumo yekushandisa nechimbichimbi kana kutenderwa neU.S.Food and Drug Administration. Neimwe nzira, vhiki mbiri dzinofanirwa kunge dzakapfuura mushure meiyo imwe-dosi COVID-19 yekudzivirira iyo yakapihwa mvumo yekushandisa nechimbichimbi kana kubvumidzwa neU.S.Food and Drug Administration, zvisinei nekuti COVID-2 yekudzivirira booster yakagamuchirwa.
kana munhu akaramba kuratidza humbowo hwekudzivirira imba yekukiya). Kana vachipinda munzvimbo yezvinangwa zvidiki zvakadaro, vanhu vacho vanofanirwa kupfeka kumeso kumeso.
Meya we Honolulu, Rick Blangiardi akati mabhizinesi akafukidzwa nechirongwa che Safe Access Oahu anotarisirwa kutevedzera mitemo mitsva. Izvo zvisingakwanise kutarisana nezvikwereti kana kutovharwa kwenguva pfupi. Oahu maresitorendi uye zvimwe zvivakwa zvicharamba zvichienderera zvichiteerana nezvazvino masimba ekurambidza zvakare ezvinyorwa kune vashanyi avo kuenda kuHawaii.